DXVK 1.9 inouya neYUV yekutsigira rutsigiro, kugadzirisa uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Kuburitswa kweshanduro nyowani yeDXVK 1.9 ichangobva kuziviswa mune izvo shanduko dzakasiyana dzakaitwa, idzo YUV magadzirirwo, kugadzirisa mune latency uye mafuremu anomira kunze. Iyi vhezheni itsva yeDXVK inoda madhiraivha anotsigira Vulkan 1.1 API, senge Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0, uye AMDVLK.
Kune avo vasina kujaira chirongwa ichi, vanofanirwa kuziva kuti ndizvo chishandiso chinogona kushandura Microsoft DirectX 11 uye DirectX 10 graphic mafoni kuVulkan, iyo yakavhurwa sosi yemifananidzo API inoenderana neLinux. Kuti ushandise DXVK, pamusoro peWine neVulkan, iwe uchave uchinyatso kuda iyo Vulkan-inoenderana GPU.
1 Main makuru maficha eDXVK 1.9
Main makuru maficha eDXVK 1.9
Mune iyi vhezheni nyowani zvakasimbiswa izvo yakawedzera yekutanga rutsigiro rwemuvara unodzikisira mafomati eYUV, senge NV12, iyo inoshandiswa pakutamba vhidhiyo mune mimwe mitambo.
kunze kwaizvozvo ID3D11VideoProcessor API yakaitwa, inoshandiswa kuburitsa vhidhiyo mumitambo Nier Replicant uye Contra: Rogue Corps uye rutsigiro rwekuchengetedza rasterization yeGPU yakawedzerwawo iyo inotsigira iri basa. Shanduko inobvumira iyo NVIDIA ShadowLibs sarudzo kuti ishandiswe muFinal Fantasy XV nemimwe mitambo.
Ukuwo, yakaderedzwa yekuratidzira lag inotaurwa, iyo inogona kugadzirisa matambudziko mumitambo yakatemwa neVsync, FPS makapeti kana kumisikidzwa kweDXGI uye zvakare yakamira kutumira ruzivo kuzvishandiso nezveVulkan software kuitisa, senge Lavapipe, kana paine Vulkan-inogoneswa GPU mune ino sisitimu, iyo inogadzirisa matambudziko kana mitambo ichiedza kushandisa Lavapipe pane chaiyo mutongi. Kugonesa Lavapipe, zvinokurudzirwa kumisikidza nharaunda inoshanduka VK_ICD_FILENAMES.
Chinhu chakawedzerwa kuwedzera muganho wehuremu, iyo inogona kushandiswa pakuita mashandiro akanaka emitambo isina kugadzirirwa yakakwira FPS.
Yakagadziridzwa kurodha kwemavara uye mabhureki muD3D9.
Yakagadziriswa sosi yekufukidza isingaoneke kana uchishandisa DXGI kuitiswa kweDXVK
Workaround yakaremara kudzikisa huwandu hwekupenga kwakasarudzika mumatyairi eNvidia, sezvo nyaya yepasipi yemutyairi yakagadziriswa mune shanduro 465.xx, izvo zvinogona kuvandudza mashandiro mune mimwe mitambo.
Yakagadziriswa chaiyo nyaya mumumvuri isina iyo inogadzirisazveMvumo yemureza yakaiswa.
Yakagadziriswa zvimwe zvingangonetsekana zvine chekuita nekudzimwa kwemifananidzo izvo zvinogona kutungamira kuzvigadzirwa kana kupaza kupa.
Yakagadzirisa nyaya uko mitambo ine yepamusoro faira yekuwedzera inogona kugadzira duplicate marekodhi kana cache mafaera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » DXVK 1.9 inouya nerutsigiro rweYUV zvigadzirwa, zvigadziriso nezvimwe